Dhagayso+Sawirro: Shirkadda Isgaarsiinta Golis oo Adeegga Sahal ka dhigtay lacag la’aan 1da Bisha May – Radio Daljir
Dhagayso+Sawirro: Shirkadda Isgaarsiinta Golis oo Adeegga Sahal ka dhigtay lacag la’aan 1da Bisha May
Abriil 30, 2016 6:55 g 0
Boossaaso, April, 30 – 2016 – Masuuliyiinta sare ee shirkadda Golis ayaa ku dhawaaqay in adeegga lagacaha la isugu diro ee SAHAL uu lacag la’aan yahay laga bilaabo 1-da bisha May sanadka 2016 oo ku beegan maalinta Barri ah.
Shirk Jaraa’id oo lagu soo bandhigayay arrintan ayaa lagu qabtay xarunta wayn shirkadda waxana ugu horayn ugu hambalyeeyay macaamiisha warkan farxada leh Mareeyaha Guud ee shirkadda Golis Saciid Aadam Axmed.
“Waxaan ugu hambalyaynayaa dhamaan macaamiisha qaaliga ah ee shirkadda Golis in wixii ka bilawda maalinta Barrito ah ay sahalka lacagaha isugu diri doonaan lacag la’aan waxana talaabadaas u qaadnay si aan ugu naxariisano bulshadeena” ayuu yiri Mareeye Saciid Aadam Axmed.
Hogaanka ganacsiga shirkadda Golis Cumar Ciise Maxamed (Faaruuq) ayaa isaguna sharaxay muhiimadda uu leeyahay adeegga SAHAL isagoo sheegay inuu wax badan kusoo kordhiyay bulshada.
“SAHAL waxa uu sahlay wax badan sida magiciisa ka muuqata waxana muhiimadiisa dareemay guud ahaan macaamiisheena kala jooga magaalooyinka, dagmooyinka, tuulooyinka iyo baadiyaha kuwaas oo lacagaha isugu dira islamarkaana taleefanadooda ka dhigtay bangiyo ay ku kaydsadaan lacagaha waxana ugu bishaaraynaynaa in maantana looga dhigay lacag la’aan” ayuu sheegay Cumar Faaruuq.
Waxaa la filayaa in lacago badan la isugu diri doono adeegga SAHAL maadaama laga dhigay bilaash iyadoo lacagaha ugu badan ay isugu diri jireen ganacstada iyo dadka wadaaga xiriirka ganacsi halka dadwaynaha kalena ay soo dhawayn doonaan talaabadan maadaama ay meesha ka baxday khidmadii yarayd ee ka go’ jirtay marka ay lacag isu dirayaan.
HOOS KA DHAGAYSO SHIRKII JARAA’ID EE MAAMULKA GOLIS
Dhagayso Warkii Fiidnimo ee Radio Daljir April – 30 – 2016 Wariye Khadro Maxamed Maxamuud (Studio Daljir Boossaaso)
R.Wasaare Cumar oo horgeeyey Baarlamaanka Qorshaha Guud ee Hannaanka Doorashada